Author: Shagami Voodoora
Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada. Maxamuud Faarax Cismaan, tel: Waa goob lagu fidiyo Diinta iyo hanuuninta ummadda dun iyo adduunyaba. Marka uu hawshii loo dasfuurka u gudan kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo x. Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka.
Xubintu geeriyooto ama uu ku yimaado xanuun suurto gelin waaya gudashada xilkeeda. Rabshadaha ay sameeyeen dhalinyaradaas la abaabulay waxaa ku geeriyooday hal qof laba kalana waa ku dhaawacmeen. Urur waynaha iftiin aya safar shaqo kutagay deganka xida kaas oo u kaso qabtay deganka hawlihii u kaqaban jiray horayna u ugu helana Muwaadin kasta wuxuu xaq u leeya hay in uu ka qayb gab hawlaha siyaasadeed, dhaqaale, buisho 1 iyo pentlajd si waafaqsan xeerarka iyo Dastuurka.
Qaabilaadda diblomaasiyiinta shisheeyaha iyo ka qabashada waraaqaha aqoonsigooda Credentials. I usually don’t bother investors with taxes. Haddii uu ku dhaco xukun ciqaabeed oo kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday.
Waxa madaxda sare ee dawladda loola jeedaa: Tusaale dawlad goboleedka Puntland oo cusyb dhowaan booqanay waxaan ku soo arkey tusaalooyin fiican oo ku saabsan nidaamka maamulka oo hoos loo daadejiyo. Odeyaasha dhaqanka oo maalmihii ugu dambeeyey kulamo isugu jira xog’wareysi iyo wadatashi la yeeshay qeybaha ay quseyso geeddi-socodka doorashada Puntland sida musharraxiinta, guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka iyo saraakiisha loo xil-saaray ammaanka xilliga doorashada, wadatashi kadib, maanta oo ay taariikhdu tahay waxay soo-saareen bayaan.
TOP Related Articles 17TH EDITION WIRING REGS PDF
Wasiirka waxa bo xil-saari karaa hal Wasaarad ama in ka badan.
Waajibaadka Muwaadinka iyo Ciqaabta Gudasho La’aanta. Mushaharka iyo gunnada xubnaha Guddida Culimada xeer baa nidaaminaya.
Dawladdu waxay oogaysaa shacaa’irta dimiga ah umuurta Diinta ; waxaanay fulinaysaa axkaamta Shareecadda. Labada Gole ee Baarlamaanku fadhiyo wadajir ah ayey ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin: Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene.
Safar qaatay mudo shan cisho ah aya waxaan ku tagnay degaanka xidda. Masaajidku waa goob cibaado, waxaanu mudan yahay xurmayn. Hantida guud ee lahaanshaheeda ama ka faa’iidaysigeeda loo baahdo in Ia wareejiyo waxay ku wareegi kartaa si xeerka waafaqsan. Somali New Policy compartilhou um link.
Diinta iyo dhaqanka kudoorta deeq iyo Hoodalana kudoorta dulqaad iyo samir Kudoorta codkiinana deeq usoiya esh cala Hees madax weynaha dhaartu udhiman tahey Share and difaac iyo dowlad nimo guuul. Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa qeexaya hab-socodka mashruuc-sharci, waana in uu muujiyaa mudnaanta gaar ah ee ay Ieeyihiin mashruuc-sharciyada la xidhiidha maaliyadda iyo kuwa Xukuumaddu u aragto degdeg, kuwaas oo mudan in iyaga la hormariyo.
Xoghayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gole cusub. Bulsho kasta iyaga aya hormariya deegaankooda, Muddada xilka Golaha Wakiiladu waa 5 shan sano oo ka bilaabmaya maalinta Maxkamadda Sare ay ku dhawaaqdo go’aamada doorashada. Haddii ay bannaanto xubin ka mid ah Golaha Guurtidu ka hor Iixda bilood ee ugu dambeeya muddada xilka Golaha Guurtida, waxa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamays-tirayso muddada xiIka Golaha.
Tagida barnamujki solarka wajikisii labad tiradisu tahay 9 xabo waxayna katagen sharacyada magaaladda xidda 2. Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Golaha Guurtida. Said Dani gobolka Mudug cusu ahayn Puntland shalay, ha ogaadaan marka Xildhibaanada sharaxta leh ee gobolkaas in uusan istaahilin inay codkooda siiyaan.
Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka ku nool xidda dal joog iyo dibad joogba Waxaana leenahy intan iyo inkabadanba waaan gaari doona inshallah. Xasillooni lama helayo intaan xaalkaan ku wada jirno.
Isu Celinta Eedaysanayaasha Ama Dembiilayaasha iyo.
cushb Dhiraynta dhowr goobood o ay ka midyihiin masajida iyo goobo muhiima deganka hordhacna u ah dhiraynta deeganka iyaduna sidoo kale waxay kuso gaba gabowday si wanagsan Fadlan wixii aad awooddo ka qayb qaado,kuna soo hagaaji lambarada iyo akuunnada shaashadda kaaga muuqda.
Haddii uu ku qanci waayo Madaxweynuhu warbixinta Xeer-ilaaliyaha Guud, wuxuu amrayaa inuu Xeer-ilaaliyaha Guud la noqdo dacwadiisa. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay mabaadi’ida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka. Xubnaha Golaha Guurtida waxa lagu soo dooranayaa doorasho, habka doorashadana waxa nidaaminaya xeer.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jiray Soomaaliya la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand.
Habka loo maamulaayo, loogu ururinayo iyo looga bixinayo xeer ayaa nidaaminaya.
Xaalada Bosaso ayaa hada degan noloshuna si caadiya ayay usocotaa. Ciidammada tababarka ku qaadanaya xerada Turkiga uu dhawaan ka furey Muqdisho, ayaa la sheegay qorigan inay adeegsan doonan, sidda lugu baahiyay Warbaahinta Turkiga.
CadaaladHorumar iyo Ictiraaf. Haddii Golahu ka aqbalo istiqaalad. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa. Iftiin Organization updated their cover photo.